फाईल अधिलेखन हुनु अघि यू डिस्क डाटा पुनर्स्थापित गर्नुहोस् - [How to recover by3step]
Your location:Data recovery software>Step>Nepali>फाईल अधिलेखन हुनु अघि यू डिस्क डाटा पुनर्स्थापित गर्नुहोस्
फाईल अधिलेखन हुनु अघि यू डिस्क डाटा पुनर्स्थापित गर्नुहोस्
कसरी यू डिस्क डाटा पुन: भण्डारण गर्ने? साधारण विधिहरू के हुन्?
फाइल अधिलेखन गर्नु भन्दा पहिले यो विभिन्न तरिकाले पुन: प्राप्ति गर्न सकिन्छ। साधारण यू डिस्क डाटा रिकभरी विधाहरू के हुन्?
एक विधि: सरल र सब भन्दा सिधा डेटा रिकभरी सफ्टवेयर पुन: प्राप्ति गर्न प्रयोग गर्नु हो। आज, डाटा रिकभरी सफ्टवेयर अपरेसनहरू तुलनात्मक रूपमा सरल छन्, जटिल अपरेसनहरू मोड्दै जुन केही कार्यहरू माउस क्लिकको साथ पूरा गर्न सकिन्छ कि साधारण कार्यहरूमा एक पटक अप्राप्य थियो।
विधि २: म्यानुअल तरीकाले डेटा पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। पेशेवरहरूले हेक्साडेसिमल सेक्टरहरूमा डाटा सम्पादन गरेर हराएका फाईलहरू, विभाजनहरू, आदि पुन: प्राप्त गर्दछन्। साधारण प्रयोगकर्ताहरूले डाटा रिकभरी सेवाहरू खरीद गर्न सक्दछन् र पेशेवरहरूलाई उनीहरूलाई लगत पुन: प्राप्ति गर्न मद्दत गर्छन्।
विधि:: पेशेवर डेटा रिकभरी कम्पनी खोज्नुहोस्। यदि एक गम्भीर शारीरिक असफलता यू डिस्कमा देखा पर्दछ र डाटा रिकभरी सफ्टवेयरले यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन भने तपाई समाधान खोज्नको लागि पेशेवर डेटा रिकभरी एजेन्सी फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
ट्यूटोरियल १: हराएको डाटा कसरी हटाउने र हटाइएको यू डिस्क द्वारा ढाँचा?
यस ट्यूटोरियलले वर्णन गर्दछ Bplandatarecovery सफ्टवेयर को उपयोग गर्न को लागी फाइलहरु लाई पुनःप्राप्त गर्न को लागी गल्ती गरीएको छ वा U डिस्कमा ढाँचाबद्ध गरिएको छ। यो ट्यूटोरियल पनि लागू हुन्छ जहाँ U डिस्क खोल्न सक्दैन र ढाँचाका लागि संकेत गर्दछ।
Preविभाजन फाइल प्रणाली क्षति पुन: प्राप्ति
NextSchritte zur Wiederherstellung verlorener Daten nach einem Upgrade von Vista auf Windows 7